Football Khabar » बार्सिलोनाबाट २२२ मिलियनको सावाँ–ब्याज असुल्ने पिएसजीको रणनीति !
बार्सिलोनाबाट २२२ मिलियनको सावाँ–ब्याज असुल्ने पिएसजीको रणनीति !
फ्रेन्च क्लब पिएसजीका ब्राजिलियन स्टार नेइमार यसै समरमा क्लब छाडेर पूर्वक्लब बार्सिलोना फर्किने तयारीमा छन् । उनी क्लबको प्रि–सिजन तालिममा सहभागी नभएर आफू पिएसजीमा नरहने स्पष्ट संकेत दिइसकेका छन् ।
यसैक्रममा पिएसजीका खेलकुद निर्देशक लियोनार्दोले नेइमारले पिएसजी छाड्ने विषयमा धारणा राखेका छन् । उनले नेइमारले पिएसजी छाड्न चाहेको स्वीकार्दै क्लब उनलाई उचित मूल्यमा बिदा गर्न तयार रहेको बताएका छन् । लियोनार्दोले नेइमारका लागि हालसम्म अफिसियल रूपमा बार्सिलोनाले सम्पर्क नगरेको पनि उल्लेख गरेका छन् ।
‘हामीलाई थाहा छ, नेइमार पिएसजी छाड्न चाहन्छन् । तर, यो क्लबसँग जोडिएको विषय हो । यदि कुनै खेलाडी क्लबमा खुसी छैनन् भने क्लब तगारो बन्ने कुरै आउँदैन,’ लियोनार्दोले भने, ‘उचित मूल्यमा उनी जान सक्छन् ।’
लियोनार्दोले उचित मूल्य भनेको कति भन्ने विषयमा स्पष्ट खुलाएनन् । तर, मिडिया रिपोर्टहरू अनुसार पिएसजीले नेइमारका लागि न्यूनतम् मूल्य ३०० मिलियन युरो माग गर्ने तयारी गरेको छ । उसले नेइमारलाई २ वर्षअघि विश्वकीर्तिमानी २२२ मिलियन युरोमा बार्सिलोनाबाट किनेको थियो । पिएसजी अहिले बार्सिलोनाबाट नेइमारका लागि खर्चिएको रकमको ब्याजसमेत असुल्ने दाउमा छ ।
लियोनार्दोले नेइमार पूर्वक्लब बार्सिलोना फर्किन इच्छुक रहे पनि हालसम्म बार्सिलोनाले आफूहरूसँग सोझो सम्पर्क वा प्रस्ताव भने नगरेको पुष्टि गरे । ‘नेइमारका लागि बार्सिलोनाले आजसम्म प्रस्ताव गरेको छैन । तर, हामीलाई अन्य स्रोतबाट सूचना छ,’ लियोनार्दोले भने, ‘यदि बार्सिलोनालाई नेइमार आवश्यक छ भने उसले प्रस्ताव गर्ला ।’
प्रकाशित मिति २४ असार २०७६, मंगलवार ०८:५७